सिके राउतले असोज ३ लाई कालो दिन मनाउन लाग्दा मधेशमा खैलाबैला | My Sanchar
सिके राउतले असोज ३ लाई कालो दिन मनाउन लाग्दा मधेशमा खैलाबैला
राजविराज – मधेसलाई छुट्टै देश बनाउनु पर्छ भन्दै विखण्डनवादी धारमा उभिएका डा. सिके राउतले मधेश देश छुट्याउने कार्यलाई तिब्रताको साथ अगाडी बढाइरहेको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
लामो समयको मौनता तोड्दै राउतले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा असोज ३ लाई कालो दिन मनाउन अपिल गरेपछि तराईमा तरंग मच्चिएको छ । २ नम्बर प्रदेशको राजधानी जनकपुरमा संविधान जारी भएको दिन असोज ३ गते राउतले सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरीका युवापुस्ता भेला पारेर कालो दिवस मनाउने घोषणा गरेका छन् ।
राउतले असोज ३ लाई कालो दिन मनाएर मधेसलाई धोका भएको दिनका रुपमा उल्लेख गर्दै फेसबुकबाटै असोज ३ गते १२ बजे जनकपुर भेला हुन अपिल गरेका छन् ।
यति मात्र होइन, उनले काठमाडौंमा समेत असोज ३ गते कालो दिवस मनाउन मधेशी युवाहरुलाई अपिल गरेका छन् । उनले असोज ३ लाई कालो दिवस मनाउँदा मधेसको सहिदको सम्मान हुने बताएका छन् । मधेसी नेताहरुको पनि तस्बिर राखेर उनले फेसबुकमा गरेको अपिलले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा चर्चा पाएको छ ।
उनले जनकपुरमा युवा पुस्ता उतारेर शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरेका छन् । देश नै टुक्र्याउनु पर्छ भन्ने अभिव्यक्तिकै राजनीति गरिरहेका राउतले २८ दिन अगाडि नै असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने भनेर सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउनेको पनि संख्या बढ्दो छ । ५ लाख फ्यान भएको आफ्नो फेसबुक पेजमा राउतले असोज ३ बारे लेख्नु अघि नै उनका कार्यकर्ताहरुले फेसबुकमा राउतको तस्बिर राखेर अपिल गरेका थिए ।
राउतले गाउँगाउँ गएर २५–३० युवालाई भेला गराएर युवा दस्ता तयार पारेका छन् । सीमावर्ती बजारमा उनले युवा पुस्तालाई गराएको प्रशिक्षणबारे सुरक्षा निकायहरुमा रिपोर्ट पुगेकै छ ।
Previous : बोदे बर्साइनमा सृजना फाइनान्सको २१ औं शाखा संचालन
Next : फोरम नेकपामा समाहित हुनेः डा. कोइराला